Waa maxay dareenka bisadu? | Ogaysiis Bisadaha
Waa maxay dareenka bisadu?
Jirka bisadu waxa uu ka kooban yahay in ka badan 230 laf iyo in ka badan 500 oo muruq ah kuwaas oo u ogolaanaya in ay qabato waxyaabo badan, sida in ay kor u boodaan ilaa shan jeer in ka badan dhererkeeda, dhegeysiga codka jiirka oo todoba mitir u jira, ama sugitaanka. adiga albaabka gadaashiisa marka aad hadda uun ka soo degtay baabuurka si aad u siiso gasacaddii aad ka soo iibsatay.
Shantiisa dareen ayaa si buuxda u shaqaynayay ilaa yaraantiisii ​​​​ugu horreysay.. Aan aragno waxa ay gaar u yihiin.
Bini'aadamka, aragga ayaa ah dareenka ugu muhiimsan, bisadda ... ma aha wax aad u badan. Noocyada midabada uu awoodo inuu arko ayaa ka liita kuwa aan aragno. Dhab ahaantii, si aan fikrad kuu siiyo, inta lagu jiro maalinta, wuxuu u eg yahay qof lumay ookiyihiisa, taas oo ah, qallafsan. Maxaa intaas dheer, si dhib leh u kala saari karin midabada, kaliya cagaar, jaalle iyo buluug.
Ka soo horjeedda, araggooda habeen 8 jeer ayay naga fiican yihiin. Tani waa sababta oo ah indhahoodu waxay leeyihiin waxa loo yaqaan 'Tapetum lucidum', nooc ka mid ah 'crystalline' oo ka tarjumaysa iftiinka, taas oo ka dhigaysa xayawaanka awood u leh inuu kala saaro faahfaahinta in bini'aadamka kaliya ay ogaan karaan oo ay indhahoodu iftiiminayaan. waa il iftiin ah, ha ahaato dayaxa, bilicda kamarada, tooshka, iwm).
Dareenka maqalka bisadu waa farshaxan-yaqaan dabiici ah. Aad bay u horumarsan tahay. Labadiisa dhegood waxa ay fadhiyaan wax yar oo ka sarreeya madaxiisa, oo uu u yara rogi karaa siduu jecel yahay mar kasta oo uu ogaado dhawaq isaga danaynaya, sida shimbir shimbir ama jiir.
Dareenka uu u leeyahay dhawaaqa ayaa ah in waxa bini'aadamka ah ay tahay in mugga muusiggu uu hooseeyo (hal ama laba dhibcood oo raadiyaha ah tusaale ahaan), isaga waxay la mid tahay inay aad uga dheer tahay. Sababtoo ah, uma baahna inaad albaabka ka furto si aad u ogaato inaad u dhowdahay: cagahaaga oo dhulka ku sii socda, furahaaga jeexjeexa, buuqa ay shandadaadu samaynayso haddii aad sidato... waxaas oo dhami waxay ku siinayaan.
Bisadu waa socod-socod xadhig cidhiidhi ah oo qurux badan. Waxay ku socon kartaa waddooyin dhuuban iyadoon hal lug la ruxin. Laakiin waa maxay sababtu? Sirtu waxay ku jirtaa gudaha dhegta, gaar ahaan tan gudaha. Halkaas waxa uu leeyahay shan tubbo oo dareere ka buuxa oo furan oo timaha ku daboolan oo aad ugu nugul dhaqdhaqaaqa.
Sidaa darteed, marka ay ogaadaan in xayawaanku u soo jeestay qaab yaab leh, wuxuu u soo diraa calaamadaha maskaxda si jirku u soo jeediyo booska ku habboon. Sidan oo kale marka ay bisadu u baahato waxa ay marka hore u rogtaa madaxeeda, ka dibna dhabarka iyo lugaha hore, ugu danbayna kuwa danbe.
Maxay bisadu cuntaa? Waxay u egtahay jawaab fudud, laakiin waayadan dambe shaki badan ayaa ka soo baxay. Runtii, waa ku filan tahay in la weydiiyo nooca xayawaanku yahay, oo la eego waxa ay cunaan xubnaha kale ee qoyskiisa. Si kale haddii loo dhigo: in uu yahay doog, oo la siiyo in cougars, panthers, libaaxyada, iwm, ay sidoo kale yihiin dhogorta iyo quudinta hilibka, waa macquul in loo maleynayo in bisadu sidoo kale waa hilib cune.
Waa daruuri, dareen. Waxay cuni kartaa qaar ka mid ah badarka ama cawska, laakiin waa haddii cuntooyinkaas hore loogu cunay ugaadhsigeeda. Laakiin haddii aanad cunin hilib waxa aad ku sugan tahay dhimasho, sababtoo ah waxa aad u baahan tahay borotiinka xayawaanka si uu jidhku u shaqeeyo, iyo nafaqo loo yaqaan taurine oo indhaha caafimaadka qabta.
Bisadu waxay leedahay dareen ur ah, sidoo kale, aad uga xasaasisan kuweena. Dhab ahaan, waa 14 jeer ka sarreeya mid kasta oo naga mid ah. Sababtu waxa weeye waxa ay sanka ku leedahay 20 milyan oo unugyo reseptors ah, halka ay dadku haystaan ​​5 milyan oo keliya. Laakiin waxaa dheer, xubinteeda sanku way ka weyn tahay kuweenna.
Sida haddii tani aysan ku filneyn, qaybta sare ee palate waxay leedahay xubin loo yaqaan vomeronasal ama Xubinta Jacobson, kaas oo loo isticmaalo in lagu 'carfiyo' urta. Taasi waa sababta ay si gaar ah afka u kala qaaddo marka ay ogaato udgoonka uu rabo inuu ogaado, tusaale ahaan, cidda leh iyo sida ay tahay.
Xayawaanka, taabashadu waxay lama huraan u tahay si uu u hoggaamiyo nolol caadi ah. Tan iyo dhalashadiisa, reseptors tactile ee maqaarkaagu leeyahay, oofiyo shaqo muhiim ahU dir calaamadaha ku habboon si bisadu ay uga fal-cesho, haddii loo baahdo, oo ay sidaas uga nabad gasho, ha noqoto qabowga ama kulaylka, ama roobka haddii aanu jeclayn.
Oo sidee ku helaysaa? Waad ku mahadsan tahay suufkeeda iyo shamiisheeda, inta badan. Kuwani waa qaybaha jidhkaaga oo aad sida ugu badan u isticmaasho marka ay timaaddo ogaanshaha (ama aqoonsiga) deegaanka aad ku nooshahay. Dhinaca kale, suufka calaacalaha ah ayaa aad ugu nugul gariirrada, si aad u badan si ay kaaga caawiyaan inaad qaadato booska saxda ah markaad socoto ama ordeyso.
Xaaladda gaarka ah ee shaarubaha, kuwani waxay xasaasi u yihiin qulqulka hawada, sidaas darteed waxay faa'iido u leeyihiin in la ogaado ugaadhsiga suurtagalka ah; Sidoo kale, waxaa xiiso leh in la ogaado inay faa'iido u leedahay inuu ogaado inuu mari karo waddo cidhiidhi ah iyo in kale, mar haddii dhererka shaarib ee dhinac ka mid ah wejigiisa uu ku beegan yahay caarada shaarib ee ka soo horjeeda. ballaca jidhka bisadda.
Sida aad arki karto, bisadu waa xayawaan cajiib ah, gudaha iyo dibaddaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Waa maxay dareenka bisadu?
Sidee loo caawin karaa bisadaha ba'an?
Waa maxay bisadaha cawska ah?